Warbixinta la Sheegay in Ururka Midowga Afrika uu soo Saarey iyo Jawaabta Dowladda – Xogmaal.com
Warbixinta la Sheegay in Ururka Midowga Afrika uu soo Saarey iyo Jawaabta Dowladda
By MN	 Last updated Jul 18, 2021
Warbixin aan si toos ah looga soo saarin Ururka Midowga Afrika ayaa lagu shaaciyey baraha bulshada, lamana hubo in ay tahay mid kama danbeysta ah ee ay hay-addu soo saari doonto. Hasa ahaatee dowladda federaalka ayaa ka jawaabtey warbixintaas iyaga oo ka biyodiidey qiimeynta ay sameeyeen guddiga madaxabanaan ee Midowga Afrika.
Waxa la sheegay in guddiga madaxabanaan ee Midowga Afrika uu sameeyey qiimeyn xaallada Soomaaliya oo dhowr meellood taabaneysa. Warbixintan oo 35 bog ka kooban ayaa lagu faahfaahiyey qodobada soo socda.
Xoggo la ogaaday
Waxyaabaha ay warbixintan qeexeyso ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin saameynta faragelinta shisheeye ee arrimaha siyaasada dalka iyo midda ay qabiilo gaar ah oo awood muuqato ku leh wax kasta oo Soomaaliya ka jira ay ku hayaan hanaanka dhismaha dowladnimo. Warbixintu waxa ay si kulul uga hadashey muddo kordhinti dhacdey bishii afraad ee xukumada ay sameysatey.
Dowladda Soomaaliya oo jawaab diidmo ah ka soo saartey warbixintan iyaga oo ku gacanseyray talooyinka ay soo jeediyeen.
Warka dowladda iyo faahfaahin ku saabsan warbixinta kala soco Xogmaal dhawaan.